Xog: Xageey ka baxday Magacaabista Guddigii Baarlamaanka ee loo Xilsaaray Arrinta Qalbidhagax,? – Hornafrik Media Network
Kulankii Baarlamaanka ee 3 Maalin ka hor ayaa gabagabadiisii waxa uu Guddoonka Baarlamaanka Somalia ku dhawaaqay inay Guddi u saareen Arrinta Qalbidhagax, Iyadoona Guddoomiye Jawaari uu sheegay in Magacyadda Guddigaasi uu la wadaagi doono Xildhibaanadda iyo Shacabka.
3 Maalmood kadib ma jiro Guddi Baarlamaan oo la magacaabay, Mana jiro xittaa la tashiyo ay Guddoonka Baarlamaanku kala sameeyeen arrintan Guddiyadda Joogtadda ah ee Baarlamaanka iyo Xildhibaanadda. Waxaana soo baxaya warar sheegaya in hadda uusan qorshaynayn Guddoonka Baarlamaanka inuu arrintan u magacaabo Guddi Xildhibaano ah si ay Baarlamaanka ugu soo gudbiyaan Warbixin dhamaystiran oo ku aadan Arrinta Qalbidhagax.
Sida ay Xog ku heshay HornAfrik waxaa jira heshiis hoose oo dhex maray Guddoomiyaha Baarlamaanka Somalia, Maxamad Cismaan Jawaari iyo Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre, kaasoo la xiriira in Isku Shaandhaynta Wasiiradda uu xubno ku yeesho Jawaari, iyo in mid ka mida Taliyayaasha Ciidamadda Qalabka Sidda uu isagu keensado qof uu danaynayo.
Jawaari ayaa Xukuumadda hadda dhisan waxay u xayirnayd Usbuuc dhan in isaga lagu qanciyo inaan Wasiir loo magacaabayn Maxamad Aadan Fargeeti oo ahaa Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumaddii Cumar C/rashiid, Waxaana la rumaysan yahay in haddana uu doonaya in Fargeeti laga dhigo Wasiirka Maaliyadda.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo u tagay Jawaari waxa uu diiday inay kala hadlaan wax la xiriira Qadiyadda Qalbidhagax iyo Guddigii uu balanqaaday, Wuxuuna ku gaabsaday inay isaga ka war sugaan illaa iyo waqti uusan cayimin. taasoo u muuqata in Rajadii laga qabay yagleelidda Guddi Baarlamaani ah oo ka soo tala bixiya Go’aankii ay Xukuumaddu ku dhiibtay Qalbidhagax.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo la hadlay HornAfrik waxay ku eedeeyeen Gudoomiye Jawaari in lagu laaluushay Xilal iyo Dhaqaale, isla markaana la doonayo in loo adeegsado inuu caburiyo Ra’yiga Xildhibaanadda, kana hor istaago inay la xisaabtamaan Xukuumadda.
Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa qorshaynaya inuu dhawaan isku shaandhayn ku sameeyo Xukuumadda uu hogaamiyo, Waxaana suuragal ah in lagu soo biiriyo Qaar ka mida Xildhibaanadda ku kacsan Xukuumadda, taasoo aan la ogayn inay wax ka badali karto Qadiyaddii Qalbidhagax iyo in kale.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia, Maxamad Cusmaan Jawaari oo Xilal kala duwan ka soo qabtay Somalia tan iyo Dowladdii Milatariga ahayd, laguna tiriyo Siyaasi Qunyar Socod ah ayaa haddii uu ku dhex milmo Qadiyadda Qalbidhagax oo ay Xukuumaddu doonayso inaan laga hadlin ay dhici kartaa inuu mugdi gali Mustaqbalkiisa Siyaasadeed, siday aaminsan yahiin Dadka Falanqeeya Siyaasadda Somalia.